File:Bangkok Airways logo.png - ဝီကီပီးဒီးယား
File:Bangkok Airways logo.png
ဤနမူနာ၏ အရွယ်အစား - ၆၇၈ × ၅၉၉ ပစ်ဇယ်။ အခြား ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: ၂၇၂ × ၂၄၀ ပစ်ဇယ် | ၅၄၃ × ၄၈၀ ပစ်ဇယ် | ၇၈၃ × ၆၉၂ ပစ်ဇယ်။
မူရင်းဖိုင် ‎(၇၈၃ × ၆၉၂ pixels, ဖိုင်အရွယ်အစား - ၅၄ KB, MIME အမျိုးအစား image/png)
မူ​ပိုင်​ခွင့်​ရှိ​သည့်​ ပုံများအသုံးပြုရသော အကြောင်းရင်း – အခမဲ့ မဟုတ်သော လိုဂို ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း
ဤအရာသည် ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း အတွက် လိုဂို တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဤ လိုဂို သည် Summer Timetable (March 27 to October 29, 2011) on www.bangkokair.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်ကို သိရှိစေရန်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ စွန်းထင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ရင်းပုံကို မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ရန်အတွက် လိုဂို တစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုထားသည်။
The image is placed in the infobox at the top of the article discussing ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း,asubject of public interest. The significance of the logo is to help the reader identify the organization, assure the readers that they have reached the right article containing critical commentary about the organization, and illustrate the organization's intended branding message inaway that words alone could not convey.
Fair useFair use of copyrighted material in the context of ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း//my.wikipedia.org/wiki/File:Bangkok_Airways_logo.png
ဤသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ လိုဂို တစ်ခုဖြစ်ပြီး မူပိုင်ခွင့် ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်း ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဆာဗာများတွင် လွှင့်တင်ထားသော မြန်မာဘာသာစကား ဝီကီပီးဒီးယား ပေါ်တွင် လိုဂိုများ၏ အရည်အသွေးနိမ့် ပုံများကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေရန်နှင့် နှိုင်းချိန်နိုင်ရန်တို့အတွက် အသုံးပြုခြင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ အရ တရားမျှတစွာ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ဤပုံကို ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် အခြားနေရာတွင် နောက်ထပ် အသုံးပြုထားခြင်းသည် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤပုံအား စီးပွားရေးဆိုင်ရာများတွင် အသုံးပြုခြင်းသည်လည်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Wikipedia:အခမဲ့မဟုတ်သော အကြောင်းအရာများ နှင့် Wikipedia:လိုဂိုများ ကို ကြည့်ပါ။
ဤနေရာတွင် လိုဂိုအား အသုံးပြုခြင်းသည် ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အဖွဲ့အစည်းအားလည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းမှ ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းအားလည်းကောင်း အတည်ပြုထောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ကာလပေါ် ၁၇:၅၅၊ ၄ မတ် ၂၀၁၆ ၇၈၃ × ၆၉၂ (၅၄ KB) Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
သင်သည် ဤဖိုင်အား ထပ်၍ ရေးသားမရနိုင်ပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bangkok_Airways_logo.png&oldid=293343" မှ ရယူရန်
စက်ဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်သည့် ဖန်တီးသူမပါဝင်သော ဖိုင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၄ မတ် ၂၀၁၆၊ ၁၇:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။